!! #BGB #တပ်ဖွဲ့ဝင် #တစ်ဦးအား ထိန်းသိမ်းထားရာမှ ပြန်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ ၂၅ ဇွန် ၂၀၁၅ | democracy for burma
tags: ၂၅ ဇွန် ၂၀၁၅, Bangladesh, BGB တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးအား, border, Burma, MOI, Myanmar, Press release, RAZZAK, Western Gate Guard
from → BANGLADESH, BGB တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးအား, BORDER, Burma, INFORMATION, MOI, MYANMAR
← !! #ဘူးသီးတောင်မြောက်ပိုင်းရှိ #ကျွန်းပေါက်ရွာ #ရွာလုံးကျွတ် ရေကြီးနစ်မြုပ်နေ
!! #MDY #သတိ #ငြိမ်း ဆေးခန်းအနီး #မွတ်တွေရဲ့လက်နက်ထုတ်လုပ်နေသည် #စက်ကိရိယာများ ဖမ်းမိပါသည် →